DEG DEG: Digniin laga soo saaray weeraro la sheegay in ay ku soo wajahan yihiin Muqdisho. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADEG DEG: Digniin laga soo saaray weeraro la sheegay in ay ku soo wajahan yihiin Muqdisho.
Xafiisyada QM iyo Safaaradaha Shisheeye ee ku yaalla Xerada Xalane ayaa Bixiyay Digniin amni oo ku saabsan weeraro ku wajahan Bartilmaameedyo ku yaaala Magaaladda Muqdisho.
Goobaha laga digay in weeraraddu ka dhici karaaan waxaa ka mid ah Hotello ku yaalla Magaaladda gaar ahaan Wadadda makaa Al- mukarama iyo Garoonka Diyaaradaha Muqdisho, Weeradda nuuca ay yihiin lama Faaah faahin.
Hotellada iyo garoonka Diyaaaradaha ee Muqdisho ayaa bartilmaameedyo u ah Al-shabaab oo horay weerarro uga geeystayn goobahaas, tiro dhowr jeer ah ayey Al-shabaab weerareen Garoonka Diyaaradaha iyo Xerada Xalane.
Sidoo kale inta badan Hotellada ku yaalla Waddadada Maka Al-mukarama ayaa marti galiyay weerarro Al-shabaab ay ku qaadeen oo ismiidaamin iyo weeraro toos ah isugu jiray.
Dad shacab ah iyo Saraaakiil Doowladeed ayaa ku dhintay weeradddi Al-shabaab ay horay uga geysteen goobha digniintu ku wajahantahay.
Digniinta amni ee ay Soo saareen Xafiisyada QM iyo safaaradaha ku yaala Xalane ma ahan mid si guud loo faafiyay laakiin waxaa la siiyay Shaqaalaha Xarumahaas u shaqeeya oo looga digay in aysan tagin Xarumaha qatartu ku wajhantahay.
Khamiistii lasoo dhafay ayey ahayd markii Golaha Wasirada ay Bixiyeen Digniin amni, Jimcihii ka dambeeyayna ay Magaladda Ruxeen Qaraxyo iyo Weeraro toos ah oo ka dhacay Goobo si aad ah loo laaliyo gaar ahaan Meel u dhow Xarunta Hay’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka iyo waliba Iridda laga galo Madaxtooyadda Soomaaliya
Weeraradii ugu dambeeyay oo Al-shabaab sheegteen waxaa ku dhintay Dad ka badan 40 ruux,waxaana dhaawacmay ku dhawaad 30 kale.
Hay’adaha amaanka ayaa qaatay shirar isdaba joog ah oo amaanka lagu adkeeynayo.
Sawiro:-Dowladda Masar Oo Ku Dhawaaqday Howlo Ay Ka Hirgelineyso…
44,849 total views, 1,799 views today
44,849 total views, 1,799 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
44,920 total views, 1,798 views today
44,920 total views, 1,798 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
44,933 total views, 1,797 views today
44,933 total views, 1,797 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,955 total views, 1,797 views today
44,955 total views, 1,797 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
44,990 total views, 1,799 views today
44,990 total views, 1,799 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]